February 2021 - Nepal Times Online
झापाको दमकमा फेरी अर्को घ,टना सार्वजनिक भएको छ । पाँचथर फालेलुगंका मनकुमार राई झापाको दमकका उनी भाडामा बस्दै आएका थिए । श्रीमती सहित दमकमा बस्दै आएका उनले श्रीमतीले निकै दुख दिएको र अब जिउन नसक्ने भन्दै एक अडियो रेकर्ड गराएका छन् । उनले सो अडियो आफ्नो भाईलाई पठाएका छन् । उनले भाईलाई श्रीमतीकै कारण जिउन […]
तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्न .. के यो फेवा ताल पोखरा हो? पोखरामा रहेको फेवा ताल मर्मत सुधारका लागि तालमा रहेको पानी सुकाईएको छ । तालमा पानी कम भएसंगै हेर्ने र पानी विनाको तालमा मनोरञ्जन गर्नेहरु भिड लाग्ने गरेको छ ! तालको मर्मत सम्पन्न भएपछि पुन तालमा पानी भरिनेछ । पानी नभएको ताल हेर्न र फोटो […]
Posted on February 19, 2021 February 19, 2021 Author USER-1	Comment(0)
राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर भागरथी भट्टको अन्तिम संस्कार (भिडियो)
काठमाडौ । शव फेला परेको १७ दिन पछि भागरथी भट्टको अन्त्यटि गरिएको छ । उनलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर अन्त्यष्टि गरिएको छ । गत माघ २१ गते विद्यालय गएकी भागरथी २२ गते मृ त अवस्थामा लवलेक सामुदायिक वनमा फेला परेकी थिइन् । उनको कर णी पछि ह त्या गरिएको थियो । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ […]
✍️ राधाकृष्ण देउजा बैतडी । गत मंसिरको कुरा हो । त्यो दिन आमा घास लिन जानुभएको थियो। बा काम गर्न स्वर (पिथौरागढ,भारत) गएका थिए । भर्खरै मन्दिरबाट फर्केर घरमा एक्लै बसिरहेको बेला खडक सर आए । जसले मलाई एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म पढाएका थिए । मैले तल्लो घरमा जाने तयारी गर्दैगर्दा उनले मलाई च्या’प्प समते । […]
बुवा बिते ,पागल आमा ,३ टुहुरा सन्तान, छैन अन्न ,भत्केको घरमै बुवाको कि`रिया बस्दै (भिडियो सहित )
बाग्लुङ जिल्लाको बेटिगाट गाउपालिका वडा २ को सिक्रेडमार गाउपालिमा बुवा बिते आमा पा`गल अनि टु`हुरा सन्तान जहाँ घरको छानो त छ तर ओत लाग्दैन उक्त स्थानबाट उपस्थित भएका छौ।यो परिवार धानिरहेका टोपबहादुर बिकको नि`धन पछि छोराछोरी एवम बिरामि श्रिमतिको बिचल्लि नै भएको छ । १६ बर्षका जेठा छोरा सुस्त मनस्थिति र १२ र ८ बर्षका […]
Posted on February 15, 2021 February 16, 2021 Author USER-1	Comment(0)
Posted on December 17, 2020 December 17, 2020 Author USER-1
रबिना बसेलको पशुपति शर्मा संग गाउने धोका पुरा । पुशपति, रबिना र रमेशको तहल्का ( भिडियो) सम्मान स्बरुप १ सियर अबस्य गरौ ।
आफ्नै बुहारीलाई जवरजस्ती करणी गर्ने ससुरा पक्राउ ।